‘शत्रुगते’ ले ५१ दिन मनायो, जान्नुस् कति कमायो ? « Ramailo छ
‘शत्रुगते’ ले ५१ दिन मनायो, जान्नुस् कति कमायो ?
प्रकाशित मिति : May 13, 2018
समय : 11:27 am
मह सञ्चारको प्रस्तुतीमा किरण केसीले निर्माण गरेको फिल्म ‘शत्रुगते’ले गौरवमय ५१ दिन मनाएको छ । राजधानीका आधा दर्जन भन्दा बढी हलहरुमा फिल्मले शनिबार प्रदर्शनको एकाउन्न दिन पुरा गरेको हो ।
प्रदीप भट्टराई निर्देशित शत्रुगते ले राजधानीका गोपीकृष्ण, अष्टनारायण, गुण, क्यूएफएक्स, बिग मुभिज, सिटीम्याक्स, बाराही लगायत हलहरुमा प्रदर्शनको ५१ दिन पुरा गरेको हो । लामो समयपछि नेपाली फिल्मा वृत्तमा प्रदर्शनको गौरवमय ५१ दिन मनाएको शत्रुगतेले व्यापार चाहिं कति गर्यो त ?
निर्माता किरण केसीले फिल्मले गरेको व्यापार सार्वजनिक नगर्ने बताए । तर ‘शत्रुगते’को कुल कलेक्सन १३ करोड ग्रस कलेक्सन पुग्ने हिसाब हलवाला र वितरकको छ । यसर्थ शत्रुगते ‘छक्का पञ्जा’ र ‘छक्का पञ्जा २’ पछि सर्वाधिक ग्रस कलेक्सन गर्ने तेश्रो फिल्म बन्न सफल भएको छ ।
फिल्मले गौरवमय ५१ दिन पुरा गरेको खुसीयालीमा शनिबार ललितपुरस्थित इमाडोलमा रात्री भोज गर्दै टिमले खुसीयाली बाँड्यो । त्यहाँ फिल्मका कलाकार, प्राविधिक, हल सञ्चालक, वितरक र सञ्चारकर्मीलाई ट्रफी तथा सम्मान पत्र प्रदान गरियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मह जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य थिए ।
कार्यक्रममा बसुन्धरा भूषाल, शिवहरी पौडेल, रमेश रञ्जन झा, प्रियंका कार्की, आँचल शर्मा लगायत उपस्थित थिए । छक्का पञ्जा ३ को छायाँकनका कारण दिपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला भने उपस्थित हुन सकेनन् । नायक पल शाह पनि राजधानी भन्दा बाहिर भएका कारण कार्यक्रममा आएनन् । अभिनेता दीलिप रायमाझीले ‘रुपै मोहनी’ गीतमा आकर्षक नाचेका थिए ।